Barnaamijka Cilmi-baarista Xoolaha ee McKnight Foundation ee Barnaamijka Cilmi-baarista Cagaaran (CCRP) wuxuu ka qaybqaadanayaa cilmi-baaris, iskaashi cilmi-baaris ah oo la xiriirta xoojinta agroolojiga (AEI). Deeqda waxay taageertaa mashaariicda cilmi-baarista ee ku salaysan gobolada ee lagu soo ururiyey afar bulsho oo ah barnaamijyo dhaqameed (CoPs) oo ku yaalla Afrika iyo Koonfurta Ameerika, ama ay yihiin kuwo isdaba-joog ah. Mashaariicda gobolku waxay ku xiran yihiin ururada caalamiga ah, qaranka, iyo / ama ururada degaanka ee leh beeraleyda yar yar, cilmi baarayaasha, xirfadlayaasha horumarinta, iyo daneeyayaasha kale. Mashaariicda iskudhafan ayaa taageeraya qaybaha shaqada ee gobollada. Mashruucyada CCRP waxay abuurayaan casriyeyn farsamo iyo bulsheed si kor loogu qaado wax soo saarka, hab-nololeedka, nafaqada, iyo sinnaanta beelaha beeraleyda. Saameyn ballaaran ayaa la dareemayaa marka fikradaha cusub, teknoolajiyada, ama geeddi-socodka loo habeeyey qaabab kala duwan, marka aragtida cilmi-baadhista ay ka dhalaalayso isbedelka siyaasadda iyo dhaqanka, iyo marka fikradu dhiirrigeliso guulo dheeraad ah.
Xiisadda Agroecological (AEI) waxaa lagu qeexay sidii loo hagaajin lahaa waxqabadka beeraha iyada oo loo marayo mabaadi'da xeeldheeraadka maareynta beeraha iyo maareynta nidaamka. Iyadoo ku xiran xaaladda, horumarinta waxqabadka ayaa macnaheedu noqon karaa mid kasta oo ka mid ah kuwan soo socda: korodhka wax soo saarka, isticmaalka korodhka ilaha maxaliga ah, cuntada wanaagsan, korodhka sinnaanta, korodhka korodhka adkeysiga iyo bixinta adeegga deegaanka deegaanka. Astaamaha, AEI:
Wuxuu adeegsanayaa aqoonta gudaha iyo caalamiga ah si loo hagaajiyo tayada iyo waxtarka wax soo saarka beeraha, geedaha, xoolaha, cayayaanka iyo cudurrada, iyo maareynta dhulka;
Horumarinta caafimaadka ciidda iyo bacriminta, waxay kordhisaa kala duwanaanta shaqaynta, waxayna yareysaa khasaaraha ka hor iyo ka dib goosashada;
Waxay u qaybisaa horumarinta silsiladaha qiimaha degaanka iyo cuntooyinka kala duwan iyo kuwa nafaqada leh;
Miyuu u jilicsan yahay oo wax ka qaban karaa xaaladaha degaanka, oo ay ka mid yihiin helitaanka beeraha ee wax-soo-saarka iyo suuqyada;
Waxay ku saleysan tahay isbedelka fahamka baafinta, dhaqaalaha, dhaqanka, jinsiga, cimilada, iyo waxyaabaha kale;
Waxay yareysaa halista waxayna kordhisaa wax soo saarka iyada oo loo marayo adkeysi kor u kacsan iyo la qabsashada;
Waxay ubaahan tahay wada shaqeyn dhinacyo badan oo tixgeliya awooda iyo sinnaanta.
Dadka deegaanka iyo ururada waxaa lagu aqoonsan yahay habka juquraafiga ah ee CCRP iyada oo ay ku jirto faham balaadhan oo ku saabsan caqabadaha gobollada ay wajahayaan. In cilmi-baaris lagu maalgaliyo CCRP, deeq-bixiyeyaashu waxay horumariyaan iskaashiga tayada iyo muddada dheer ee saamileeyda. Wadaagidda aqoon-is-weydaarsiga ee shuraakadu waxay xoojisaa hay'adaha maxaliga ah waxayna kordhinaysaa suuroggalnimada ficil wadajir ah iyo xal waara
Beelaha Bulshada ee CCRP
CCRP waxay diiradda saareysaa afar gobol oo ka mid ah nabadgelyo-xumada sare, oo maalgelin mashaariicda lagu dhammaystirayo lana hormariyo liiska deeq-bixiyayaasha gobolka iyo barnaamijyada. CCRP waxay isticmaashaa habka jimicsiga (CoP), kaas oo dadka iyo ururrada u leh dadaalka guud ee AEI ay si joogto ah uula dhaqmaan si ay u hagaajiyaan shaqadooda. Habka CoP-ga ee CCRP wuxuu xoojinayaa xiriirinta shabakada, barashada, iyo ficil wadajir ah. Iskuduwaha Gobolku wuxuu ujeedkiisu yahay in uu fududeeyo iskaashiga, wada-noolaanshaha aqoonta, iyo is-beddelidda / war-is-weydaarsiga macluumaadka, iyo sidoo kale gacan ka gaysiga xoojinta awoodda heer gobol, hay'ad, mashruuc iyo heer shakhsi. Is-weydaarsiga barashada wuxuu ku dhacaa gudaha, inta u dhaxaysa, iyo ka baxsan afar barnaamijyada Juqraafiga ah.
Istaraatiijiyooyinka Gobollada iyo Kooxaha
Andes CoP (Bolivia, Ecuador, iyo Peru)
Waxay taageertaa nidaamyo isku-dhafan oo kala duwan oo soo dhaweeya ilaalinta iyo kala duwanaanshada beeraha beeraha. Gobolkan waxaa taageeraya Julio Postigo iyo Claire Nicklin.
Wadamada Bariga Afrika (Ethiopia, Kenya, iyo Uganda)
Ujeeddadiisu waxay tahay in la hagaajiyo waxqabadyada beeraha iyo, iyada oo loo marayo kala duwanaansho kala duwanaansho, si loo xoojiyo cuntooyinka maxalliga ah iyo hab-nololeedyada. Gobolkaan waxaa taageera Beth Medvecky iyo Linnet Gohole.
Koonfur Afrika (Malawi, Mozambique, iyo Tansaaniya)
Ujeedooyinka baaritaanka caqabadaha si loo yareeyo wax soo saarka iyo sidoo kale horumarinta wax soo saarka dalagyada iyo habka goosashada ka dib. Gobolkaan waxaa taageera Kate Wellard iyo Prudence Kaijage.
Wadamada Galbeedka Africa (Burkina Faso, Mali, iyo Niger)
Waxay ku dadaaleysaa kor-u-qaadka wax-soo-saarka iyo tabarucaadka nafaqada ee habka waxsoosaarka masagada iyo miro-dhiska maskaxda iyadoo loo marayo xoojinta agroolojiga, kala-soocidda kala-soocidda iyo dalagyada yar-yar, hagaajinta geedka dhirta iyo horumarinta qiimaha degaanka. Gobolkaan waxaa taageera Bettina Haussmann iyo Batamaka qaar ka mid ah.
Miisaaniyadda deeqda la jarayo
Taageerada dhinacyada xiisaha leh ee ka jira Daraasooyinka Gobolka. Kuwani waxay la xiriiri karaan wada-hadallada caalamiga ah ee ku habboon AEI iyo sugnaanta cuntada caalamka, ama fikradaha cusub ama fikradda cusub ee farsamada ee ku habboon cilmi baarista AEI. Jane Maland Caid iyo Rebecca Nelson ayaa taageeray deeq-bixinta.
Ka Fikirka CCRP ee kaqeybgalka Wadashaqaynta
Bixiyeyaasha CCIC waxay si joogta ah u soo sheegaan in habka barnaamijka KoP uu barnaamijku yahay mid ka mid ah qaybaha ugu qiimaha badnaa ee qiimaha barnaamijka, taasoo gacan ka geysaneysa tayada horumarinta cilmi-baarista iyo sidoo kale xiriirka joogtada ah iyo iskaashiga joogtada ah ee daneeyayaasha. Si kastaba ha noqotee, waa hab-dhaqaale-iyo waqti go'an. Filashooyinka iyo faa'iidooyinka kaqaybqaadashada kaqaybgalayaasha ee CoP waxaa ka mid ah:
Ka soo qaybgal sannad-sannadeedka CoP ee gobolka deeq bixiyaha, oo caadi ahaan ku lug leh bandhigyo saynis ah, layliyo iskudhaf ah ama moodeelo, isbarbar-dhigga is-dhexgalka iyo jawaab-celinta, dhalashada fikrada wadajirta / fikradaha wadajirka ah, iyo / ama booqashooyinka goobaha socda. (Miisaaniyada lagu daboolayo safarka iyo kharashyada la xiriira waxay ku jiraan miisaaniyada mashruuca deeqda);
Taageero iyo iskaashi la leh CCRP koox goboleed ee la taliyeyaasha horumarinta iyo fulinta mashaariicda deeqaha, oo ay ku jiraan shirarka la qabto, shirarka dib-u-eegista sanadka, dib-u-eegidda astaamaha iyo taageerada daabacaadda, iyo kaalmooyinka joogtada ah ee isgaarsiinta iyo farsamada;
Taageero si loo horumariyo laguna xoojiyo fikirka iyo fekerka qiimaynta-Waxbarashada xirfadaha iyo hababka ku saabsan qiimeynta koritaanka iyo ficil la-qabsashada- iyadoo la kaashanayo kormeeraha la-socoshada Isdhexgalka, Qiimeynta, & Qorsheynta (IMEP);
Caawinaad xoojinta qorshaynta cilmi-baarista, naqshadeynta, fulinta, iyo falanqaynta-Waxay ka mid yihiin aqoon isweydaarsiyo, webinarar, kulanno, iyo hagid gacmeed oo ka socda kooxda taageerada cilmi baarista CCRP (RMS);
Fursado dheeraad ah sanadka oo dhan, sida shirarka shirarka, kulannada mashruuca iyo isbeddelka, shaqo kooxeed, iyo helitaanka khubaro farsamo iyo sidoo kale ilo iyo qalabyo kale sida qaababka, qaababka buugagga, hagayaasha, fiidiyeyaasha, dareemayaasha, xogta, iyo Bixinta teknooloojiyada GIS.
CCRP waxay isticmaashaa "aragti isbeddel" si ay u matasho siyaabaha aynu udoonayno in aan gacan ka geysano nolol-maalmeedka, waxsoosaarka, iyo nafaqada beelaha beeraleyda.
Aragtidayada isbeddelka (hoosta) waxay khariidaysaa laba dariiqo isku dhafan oo kala duwan oo loo marayo hawshayaga oo loogu talagalay inay saameyn ku yeeshaan. Mid ayaa taageera cilmi baaris ku salaysan AEI oo ujeedkiisu yahay in lagu hagaajiyo waxqabadka heerka beerta. Midda kale waa taageerada xoojinta xoojinta shaqsiyaadka iyo hay'adaha kor u qaada tayada iyo tayada cilmi baarista beeraha iyo horumarinta, kuwaas oo saldhig u ah hagaajinta joogtada ah ee beeraha.
Aragtida isbeddelku wuxuu naga caawinayaa inaan aqoonsano xeeladaha maalgelinta ee mashruuca, heer gobol, iyo heerarka barnaamijka; aqoonsiga mudnaanta cilmi-baarista iyo lammaaneyaasha ku habboon iyo in la go'aamiyo muraayadda oo lagu qiimeeyo shaqadayada. Aragtida isbeddelku waxay bixisaa qaab isku mid ah si loo fahmo sida loo soo saaro habka cilmi-baarista CCRP iyo geeddi-socodka taageerada deeq bixiyeyaasha si loo abuuro saameyn.
Waxaan si joogta ah u tijaabinnaa, dib u eegnaa, oo nadiifinnaa aragtida isbeddelka labadaba si loo hagaajiyo barnaamijkeena iyo sidoo kale kuwa deeq bixiyeyaasheena iyo inaan isticmaalno waxa aan baraneyno si aan uga faa'iideysano khayraadka weyn ee bulshooyinka. Deeqda ayaa sidoo kale laga codsanayaa in ay sameeyaan aragti cad oo ah dukumiintiyada isbeddelka.
Deeqaha waxaa lagu doortaa iyadoo lagu saleynayo shuruudaha lagu darayo barnaamijka iyo mudnaanta gobolka iyo istaraatiijiyada, tayada, hal-abuurka, iyo wacyigelinta jawiga degaanka. Wax badan ka baro sida loo codsado.
Sawirada Caalamiga ah PDF
Aragtida isbedelka CCRP
Jadwalka Lifaaqa & Natiijada Dhibcaha
Mabaadii'da-Hagaha Qiimaynta Qiimaynta